Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in Marxuum Tubeec lagu aasayo Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay in Marxuum Tubeec lagu aasayo Muqdisho
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay iney go’aamisay in magaalada Muqdiso lagu aaso fanaakii Marxmuum Maxamed Suleymaan Tubeec oo shalay ku geeriyooday dalka Jarmalka.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Soomaaliya dusha u ridatay qarashka meydka Tubeec looga soo qaadayo dalka Jarmalka, wuxuuna xusay in arrintaas ay ku wargeliyeen qoyskiisa.
Wasiirka Warfaafinta ee Xukuumadda Soomaaliya Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow iyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Cabdullaahi Colaad Rooble oo maanta kulan la qaatay fanaaniinta hobolalda Waaberi ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay qorsheyneyso sidii Marxuum Maxamed Suleymaan Tubeec loogu aasi lahaa Muqdisho.
Mostaf Dhuxulow ayaa sheegay in xukuumaddu la la xiriirtay qoyska Marxuumka, islamarkaana gadaal kazoo sheegi doonaan goorta la aasayo.
Fanaanka Maxamed Saleymaan Tubeec oo loo yaqaanay boqorka codka Soomaaliya ayaa shalay oo salaaso aheyd ku geeriyooday dalka Jarmalka, kadib markii uu muddo xanuunsanayey, islamarkaana lagu sameeyey qaliin.
Nicholas Kay oo Golaha Amaanka warbixin ka siiyey Soomaaliya “Waqti kasta weerar ayaa dhici kara”